Dad aad u yar ayaa aaminsan in istiraatiijiyad suuqgeyn wax ku ool ah ay yareyn karto kharashaadka ololaha suuqgeynta illaa 70%. Mana aha qasab in loo baahdo inay ku lug yeeshaan takhasusleyaal. Maqaalkan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo cilmi baaris suuq ah kaligaa, baari kara kuwa kula tartamaya iyo inaad ogaatid waxa dhagaystayaashu runtii rabaan. Istaraatiijiyad caqli badan ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto qiimaha suuqgeynta 5 milyan doolar illaa 1-2 milyan. Tani maahan wax la jeclaado, tani waa tan soo jirtay
Sida Loogu Hormariyo Daacadnimada Macaamiisha Suuqgeynta Dijital ah
Jimco, Oktoobar 19, 2018 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Nina Ritz
Ma ceshan kartid waxaadan fahmin. Marka diirada la saaro helitaanka macaamiisha joogtada ah, way fududaanaysaa in lagaa qaado. Hagaag, markaa waxaad ogaatay istiraatiijiyad helitaan, waxaad ka dhigtay badeecadaada / adeeggaaga inay ku habboon yihiin nolosha macaamiisha. Soo-jeedintaada qiimaha gaarka ah (UVP) way shaqeysaa - waxay soo jiidanaysaa beddelaad waxayna hagaysaa go'aamada iibsiga. Ma ogtahay waxa dhacaya kadib? Halkee ayuu adeegsaduhu ku habboon yahay ka dib dhammaystirka wareegga iibka? Ku bilow fahamka dhagaystayaashaaga in kastoo ay tahay
Bidix: Abuur, Xulo, Firfircooni, oo Cabir Saameeyayaasha Instagram
Arbacada, Nofeembar 22, 2017 Jimco, Nofeembar 24, 2017 Douglas Karr
Lefty waa barta suuq geynta saamaynta leh ee 'Instagram' oo ka caawisa noocyada inay ku xirnaadaan saamileyaasha ugu habboon. Waxaa hogaaminaya injineer hore ee raadinta Google, kooxda horumarinta Lefty waxay shaqeeyeen mudo 2 sano ah si ay ula yimaadaan barmaamijka ugu daalacan ee saamaynta Instagram Lefty waxay u furtay barnaamijyadooda bulshada isla markaana noocyada sida Shiseido ama Uber ayaaba isticmaalaya. Halkan waxaa ah fiidiyow kooban oo soo bandhigaya xalkooda. Lefty wuxuu dhisaa astaamaha saameynta ku leh juqraafiga, danaha,
5 Dashboorrada Google Analytics ee aan ku cabsi gelin doonin
Talaado, Juun 23, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Chris Neumann
Google Analytics waxay cabsi gelin kartaa suuqleyda badan. Waqtigan xaadirka ah dhammaanteen waan ognahay sida ay muhiimka u yihiin go'aannada xog-kaxeyntu u leedahay waaxyadeena suuq-geynta, laakiin inbadan oo naga mid ah ma ogin halka laga bilaabayo. Google Analytics waa aalad awood u leh suuq geynta falanqeeyaha, laakiin wuxuu noqon karaa mid loo dhowaan karo marka loo eego kuwa badan oo naga mid ah. Markaad ka bilaabeysid Google Analytics, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad u kala qaaddo gorfayntaada qaybaha cabbirka qaniinyada. Abuur
Waxaan la wadaagnay dhowr faahfaahin oo ku saabsan 2014 - Isbeddellada Suuq-geynta Dijital ah iyo Saadaalinta, Isbeddellada Suuqgeynta Mawduucyada, Liistada Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar iyo Saadaalinta Warbaahinta Bulshada. Dadka waawayn ee ku sugan WebMarketing123 waxay xog ururiyeen 500+ suuq galiyeyaal ah oo ku saabsan yoolalka ugu sareeya ee dhijitaalka ah iyo caqabadaha si loo ogaado waxa shaqeeya, waxa aan ahayn, iyo waxa ay qorsheynayaan sanadka 2014. Soo dejiso nuqul bilaash ah Warbixintooda Sannadlaha ee Suuq-geynta Dijital ah ee 3aad maanta.